Home Wararka Kuraastii Qoor Qoor u boobay Farmaajo oo maanta laga soo saarayo Dhusamareeb
Kuraastii Qoor Qoor u boobay Farmaajo oo maanta laga soo saarayo Dhusamareeb
Magaalada Dhuusamareeb xarunta Galmudug waxaa maanta oo ah 24ka November 2021 ka billaabaneysa Doorashada Xildhibaannada Golaha Shacabka ee qaybta lagu dooranayo Dowlad-Goboleedkaas.
Kuraasta maanta doorashadoodu ay ka dhaceyso Magaalada Dhuusamareeb waxaa horay ugu fadhiyay HOP#026 Xildhibaan Ikraan Aadan Absuge, kursiga labaad ee ah HOP#104 waxaa ku fadhiyay Mahad Cabdalla Cawad oo markale u sharaxan.
Guddiga hirgelinta Doorashooyinka Dadban ee heer Dowlad-Goboleed ee Galmudug oo diiwaangeliyay Musharixiinta u tartameysa kuraastaan ayaa sheegay in Doorashadaan ay daah-fur u tahay kuraas la shaaciyay & kuwo lagu howlan yahay dhawaan.
Ergada Beelaha iska ka go’aan gaarista Xildhibaannada ku metalaya kuraastaan ayaa lagu wargeliyay in ay u diyaargaroobaan Doorashada kuraastaan maadaama la xareeyay oo tababar la siiyay Ergadaas sida hadalka loo dhigay.
Guddiga hirgelinta Doorashooyinka ee Galmudug ayaa diiwaangeliyay Musharixiinta Shan kursi balse maanta labo kamid ah ayaa lagu dooranayaa Magaalada Dhuusamareeb, halka kuwa kale Waqtiga la dooranayo lagu sugayo Guddiga (SEIT).